ထိုင်းတုမ်ယမ်းချဉ်စပ်ခေါက်ဆွဲပြုတ် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ကြက်ပြုတ်ရည်...............၂ ခွက်( လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး)
ခေါက်ဆွဲ......................တစ်ပွဲစာ ( ၁၀၀ ဂရမ်ခန်.)
( ဂျုံ ၊ ဆန်ပြား၊ ဆန်ခေါက်ဆွဲအသေး မိမိနှစ်သက်ရာသုံးနိူင်)
အသားကင်( ကြက်သား(သို.) ၀က်သား)
ပင်အပ်မှို (သို.) ကောက်ရိုးမှို
ခရမ်းချဉ်သီး၊ တောရှောက်ခါးရွက် ၊ နံနံပင် ၊ ငရုတ်တောင့်နီ၊ပဒဲကော၊ စပါးလင်
(ကြက်ပြုတ်ရည်ထဲမှာ..မုန်လာဥဖြူ ဖတ် ၊ တရုတ်နံနံစတာလေးတွေပါဝင်နေ
စပါးလင် ၊ ပဒဲကော၊တောရှောက်ခါးရွက် ၃-၄ ဖတ်စီကိုထည့်ပြီး ၃ မိနစ်ခန်.ပြုတ်ကာ ဖယ်ထုတ်
တုမ်ယမ်းအနှစ် ၊ သကြား ၊ ငါးငံပြာရည် ၊ သံပုရာရည်တို.နှင့်အရသာသွင်းပါ။
ပုစွန်(သို.) ပင်လယ်စာထည့်ပါ။ လုချင်းအသားပြုတ်လုံး(သို.) မိမိနှစ်သက်ရာဖြည့်စွက်ပါ။ အုန်းနို.ထည့်ပေါင်းပါ။
ပြုတ်ဇကာတစ်ခုမှာ အရွက်၊ ခေါက်ဆွဲကိုပြုတ်ပေးပါ။ ဖက်ထုပ်ပြုတ်ကိုလည်း
ခေါက်ဆွဲကို ပြင်ဆင်မယ့်ပန်းကန်ထဲထည့် ၊ ချ ဉ်စပ်ဟင်းရည်လောင်းချကာ
အပေါ်ယံကနေ..ဖက်ထုပ်ပြုတ် ၊ ဖက်ထုပ်ကြော် ၊ အသားကင်ပါးပါးလှီး ၊
ထည့်ကာ ခရမ်းချဉ်သီး ၊ တောက်ရှောက်ခါးရွက် ၊နံနံပင်တို.နဲ.အလှဆင်ပေး